Koety: Raha tsy misy afa-tsy ny tsenambarotra no isarihana mpizahatany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Jona 2018 4:01 GMT
(Marihina fa tamin'ny 29 Aprily 2007 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Tezitra ireo bilaogera Koesiana fa nentina nitsidika toeram-pivarotan-dehibe iray ireo delegasiona vahiny nitsidika ny tanindrazany. Izany ve no tokony ireharehan'i Koety? Tsy misy afa-tsy izany ve no azon'ny firenena natolotra ?
Tezitra i Q ao amin'ny kuwaitism fa tsy misy toerana hitondran'ny governemanta ireo manampahefana vahiny mpitsidika afa-tsy any amin'ny toeram-pivarotan-dehibe.
Moa ve ny tenako ihany sa mampalahelo anao ity vaovao ity?
Moa ve ny Lalamben'ny Tsenambarotra ihany no tsy maintsy asehontsika amin'izao fotoana izao ??
Tsara sady vaovao izy ity, saingy tsenambarotra…. foibe fiantsenana fotsiny ihany miaraka amin'ny fisotroana kafe Starbucks maro sy fivarotana fitafiana !! Nahoana ireo manampahefana ao amin'ny governemanta no manasa ireo delegasiona vahiny, ary mitondra ny Praiminisitra ao Bahrain hijery ny fandroson'ny firenentsika amin'ny fananganana tsenambarotra iray hafa ny Praiminisitra antsika !!
Mampiseho antsika ohatra amin'ny toerana iray hafa tsara tsidihana i Qias .
Mitaraina isika rehetra fa foana i Koety ary tsy manana toerana tsara hotsidihana izy, kanefa jereo kely ity toerana ity, nandeha indroa tany aho ary mbola te ho any indray mandeha. Ny Mozea Tarik Rajab, toerana iray ahafahan'ny zavakanto Islamika mivelona indray.
Very fitokisana tamin'ny gazety tao Koety i Forzaq8 , mandritra izany fotoana.
Mety hoe zavatra kely angamba izany kanefa raha tsy afaka manamarina (ny zava-misy) amin'ny tatitra ataon'izy ireo ny gazety dia iza no hanao izany?
Notohizan'i k thekuwaiti tamin'ny vaovao mampalahelo momba ny fanakatonana ny fivarotana Virgin tany Koety izany.
Nahatratra ny atidohan'ny afera tao ambadiky ny Virgin-Koety ihany nony farany ny MOI (Minisiteran'ny Fampahalalam-baovao). Ny sasantsasany tamin'ireo antony voatanisa tao anaty lisitra; fizarana sy famoahana fitaovana tsy ara-dalàna sy ny fanofana toeram-pivarotana tsy misy fahazoan-dàlana, ankoatra ireo lalàna hafa miafina.
Nizara ny iray tamin'ireo fahininy momba an'i Koety i Athbee, ao amin'ny moodless.
Raha nandalo tany amin'ny iray tamin'ireo toeram-pivarotan-dehibe niaraka tamin'ny namana iray aho, dia gaga tamin'ny fitsikitsikiny nijery miankavia sy havanana, satria fantatro fa olona tsy mitsiky loatra izy. Toy ny hoe lasa mpitsikitsiky lava izy hatramin'ny nandehanany tao amin'ny foibe fiantsenana.
Vao maika gaga aho rehefa nanomboka niarahaba ny olona tao amin'ny fisotroana kafe iray izy na niarahaba ny mpandalo ary toy ny ireny hoe olona hilatsaka amin'ny fifidianana ireny mihitsy ny fijeriko azy!
Rehefa nanontaniako izy, dia fantatro fa mpitsidika tsy tapaka ato amin'ity toeram-pivarotan-dehibe ity ilay namako- toy ireo olon-kafa izay niarahaba azy ihany koa. Mitovy fialamboly ry zareo (na adidy). Ny adidin-dry zare o dia ny ho ao amin'ity tsenambarotra ity miaraka amin'ny bluetooth, tsiky ary (mitafy) Ghutra na jeans (miankina amin'ny fotoana) angamba ary ny voa tanamasoandro eo ampiandrasana maharitra.
Ho any amin'ny toeram-pivarotan-dehibe iray hafa indray isika , satria mitondra antsika hitsidika ny Kuwait Boat Show ny The Stallion .
Omaly, nidina nankany amin'ny tsenambarotra Al-Kout aho mba hanatrika ny hetsika iraisam-pirenena Kuwait Boat Show 2007 (Seho Sambo Koety)! Tonga tany aho tamin'ny 4:30 ora tolakandro teo ary nilaza tamiko izy ireo fa nihemotra avy amin'ny 3:30 ka lasa amin'ny 6:30 ny fisokafana! Somary faly aho nandre izany satria afaka nijery ireo tranoeva fampirantiana nefa tsy dia feno olona loatra !
Vaovao ratsy bebe kokoa avy amin'i Amer tao amin'ny HILALIYA.
Araka ny voalazan'ny “laharam-pahavononan'ny tambajotra” an'ny Zaikabe Ara-toekarena Manerantany, dia nihemotra toerana valo i Koety ka lasa any amin'ny laharana faha 54 raha faha 46 teo aloha.
Mitondra lahatsary iray momba ny fampisehoana tranainy nataon'ny tarika Kuwait TV tao amin'ny Foiben'ny Firenena Mikambana, any New York, Etazonia i Ateej Al Souf , ao amin'ny Jibla.
Fampisehoana nentim-paharazana nataon'ny tarika Kuwait TV, izay nahavita tsara dia tsara tamin'ny fampisehoana ny sanganasan-kira nasionaly tena niavaka nandritra ny Andron'ny Firenena Mikambana fanao isan-taona tany New York .
Niresaka momba ny zavatra tsapan'ny rehetra i intlxpatr ary milaza amintsika momba ny hetsika vaovao tany Koety.
Halako izany rehefa mamaky ny gazety momba ny hetsika iray aho – ny ampitson'iny! Matetika zavatra tena mahafinaritra no tiako hatao. Izany no mahatonga ahy hizara izany aminareo.